Qado Bilaash ah & Qiimo Dhimis ah | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Si aad u dalbato cuntada bilaashka ah ama qiimaha sicirka ee dugsiga oo aad uga caawiso dugsigeena uqalma lacag dheeri ah oo waxbarasho iyo qiimo dhimis, fadlan buuxi Arjiga Faa'iidooyinka Waxbarshada kuna noqo Xarunta Adeegga Degmada. Intaas waxaa sii dheer, haddii aad xaq u leedahay cuntada iskuulka ee bilaashka ah ama qiimaha jaban, waxaad sidoo kale xaq u leedahay gaadiidka baska oo bilaash ah. Si Adeegyada Nafaqada ay ula wadaagaan Waaxda Gaadiidka xaaladdaada u-qalmitaanka, fadlan buuxi foomka diiwaangelinta Khidmadda Basaska.
DHAMMAAN KA QAYBQAADAYAASHA WAA IN AY SII SAMEEYAAN SANNAD ISKUUL
Haddii aad su'aalo qabtid ama aad u baahan tahay caawimaad, ka wac Waaxda Adeegyada Nafaqada 952-401-5034.
Codsiyada waxaa laga baaraandegaa Xarunta Adeegga Degmada. Waxaan higsaneynaa inaan ka shaqeyno codsiyada la helay isla maalintaas. Waxaad warqad ku heli doontaa boostada 10 maalmood oo shaqo gudahood oo ku saabsan xaaladdaada. Macaashkaagu wuxuu bilaabmayaa maalinta codsigaaga la hawlgalinayo.
Fadlan si toos ah ugu soo celi arjigaaga:
Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka
Dugsiyadeenu waxay bixiyaan cunto caafimaad leh maalin kasta. Qadada waxay ku kacaysaa $ 2.85 Dugsiga Hoose, $ 2.95 Dhexe, iyo $ 3.15 Ardayda Dugsiga Sare. Carruurtu waxay xaq u yeelan karaan cunnooyin bilaash ah ama raashin qiimo jaban. Sannadkan cusub: Ardayda uqalma cunnada iskuulka qiimo jaban waxaa looheli doonaa qado bilaash ah.
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee quseeya qadooyinka bilaashka ah iyo kuwa qiimaha jaban:
Sideen ku helaa arji ku qoran luqad kale?
Ayaa heli kara Cuntada Dugsiga ee Bilaashka ah ama Qiimaha Yar?
Waxaan helayaa WIC. Carruurtaydu ma heli karaan cunto bilaash ah?
Miyaan buuxiyaa arji haddii aan helo warqad sannad dugsiyeedkan oo sheegaya in carruurtayda si toos ah looga oggolaaday Cunto Bilaash ah oo ku saleysan xogta Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Minnesota?
Yaan ku darayaa xubnaha reerka?
Ma dalban karaa haddii qof ka tirsan qoyskeyga uusan heysan dhalashada Mareykanka?
Kawaran haddii dakhligeygu uusan had iyo jeer isku mid ahayn?
Macluumaadka aan bixiyo miyaa la hubin doonaa?
Sidee loo ilaalin doonaa macluumaadka?
Haddii aanan hadda u qalmin, miyaan codsan karaa goor dambe?
Ka waran haddii aanan ku raacsaneyn go'aanka dugsiga ee ku saabsan codsigeyga?
Waxaan marin u leenahay xulashooyin luqadeed oo dhowr ah, oo ay ku jiraan Isbaanishka.
Ka qaybgalayaasha Todos los deben volver a solicitar cada año escolar. Información importante sobre la Escuela de comidas de su hijo y Beneficios de Transporte Estimados Padres / Tutores: Warbixinno muhiim ah
Carruurta ku jirta qoysaska kaqeyb qaadanaya Barnaamijka Caawinta Nafaqada Dheeriga ah (SNAP), Barnaamijka Maalgashiga Qoyska ee Minnesota (MFIP) ama Barnaamijka Qaybinta Cuntada ee Boos Celinta Hindida (FDPIR), iyo foster, hoylaawayaasha, soo-guuraaga iyo carruurta baxsadka ah waxay heli karaan cunto iskuul oo bilaash ah iyaga oo aan soo sheegin dakhliga qoyska . Ama carruurtu waxay heli karaan cunnooyinka dugsiga bilaashka ah haddii dakhliga qoyskoodu ka hooseeyo dakhliga ugu badan ee lagu muujiyey tirada qoyskooda sida ku xusan tilmaamaha.
Carruurta ku jirta qoysaska kaqeybgalaya WIC way u qalmi karaan cunnooyin bilaash ah. Fadlan buuxi arji.
Ha buuxinin Arjiga Faa'iidooyinka Waxbarsho haddii dhammaan carruurtaada si toos ah looga caddeeyey Cunnooyinka Dugsiga Bilaashka ah. Haddii kaliya carruurtaada qaar si toos ah loo caddeeyay, waxaad ku dari kartaa ardaydaada warqadda aad ka hesho Adeegyada Nafaqada waxaadna u diri kartaa nuqul Xarunta Adeegga Degmada si aad u dalbato carruurtaada aan si toos ah loo aqoonsan.
Ku dar naftaada iyo dadka kale ee guriga kula nool oo dhan, qaraabo ama ahow (sida awoowe / ayeeyo, ehelka kale, ama asxaabta).
Haa. Adiga ama caruurtaada ma aha inaad ahaataan muwaadiniin Mareykan ah si caruurtiinu ugu qalmaan cuntada bilaashka ah.
Qor lacagta aad caadi ahaan hesho. Haddii aad caadiyan hesho saacado dheeraad ah, ku dar, laakiin ha ku darin haddii aad saacado dheeraad ah hesho oo keliya mararka qaarkood.
Haa, waxaana laga yaabaa inaan ku weydiisanno inaad noo soo dirto caddeyn qoran.
Macluumaadka aad ku bixiso foomka, iyo heerka oggolaanshaha cunuggaaga ee dheefaha cuntada dugsiga, ayaa loo ilaalin doonaa inay noqdaan xog gaar ah. Wixii macluumaad dheeraad ah ka eeg bogga dambe ee Codsiga Faa'iidooyinka Waxbarasho.
Haa. Fadlan buuxi codsi wakhti kasta haddii dakhligaagu hoos u dhaco, tirada qoyskaagu kor u kacdo, ama aad bilowdo helitaanka dheefaha SNAP, MFIP ama FDPIR.
Waa inaad kala hadashaa sarkaalka dugsiga 952-401-5048. Waxaad codsan kartaa dhageysi.
Foomka Diiwaangelinta Khidmadda Basaska Gaadiidka
Kheyraad Dheeraad ah oo loogu talagalay Qoysaska uqalma Bilaashka iyo Faa'iidooyinka Dhimista